လူဝင်စားရှိတယ်ဆိုတာ …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လူဝင်စားရှိတယ်ဆိုတာ ….
Posted by fatty on Oct 5, 2010 in Creative Writing |5comments
သီပေါမင်းလက်ထက်က .. အပျိုတော်တဦးနဲ့လူပျိုတဦး … အချစ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး နှစ်ယောက်စလုံး အဆိပ်သောက်သေခဲ့ကြပြီး … လူပြန်ဝင်စားကြပါတယ်။
ကလေးနှစ်ယောက်စလုံး တပြိုင်ထဲ လူပြန်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုပါတော့ … တမိသားစုဆီမှာ ၀င်စားကြတာပါ … ၄ .. ၅ နှစ်ရောက်တော့သူတို့ရဲ့အတိတ်ဘ၀တွေကိုပြန်မှတ်မိပြီး
ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြတယ် … အသေးစိတ်တော့ရေးမပြတော့ပါ … သူတို့ နာနာဘာဝ ဖြစ်ခဲ့တုံးက အကြောင်းတွေ .. ဥပမာ ..မန်းလေးမြို့ရဲ့ ချောင်းတခုမှာ …
ရေခပ်လာတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးဆီ ၀င်စားချင်လို့ အမှိုက် သစ်ရွက်ပုံစံနဲ့ ရေအိုးထဲလိုက်သွားရပုံတွေ … သူများတွေကိုခဲနဲ့ပေါက်ပြီး စကြတော့တစ္ဆေခြောက်တယ်ဟေ့ဆိုပြီးပြေးကြတော့ …နှစ်ယောက်သား သဘောတွေကျပြီး ရီကြရပုံတွေကိုပြန်ပြောကြ ပါတယ်။
လူဝင်စားပြီးကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ပြန်ကြတော့ … ဘ၀ဟောင်းက လူတွေကိုခေါ်ပြော နှုတ်ဆက်နိုင်တာတွေကြာင့် …သူတို့သတင်းဟာ ..သီပေါမင်းအထိ ပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။
သီပေါမင်းကခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်တာတွေ့ရလို့ သူတို့ကိုဆုတော်များ ပေးသနားတဲ့အကြောင်း …ကို ရတနာပုံသတင်းစာလို့ထင်ပါတယ် ..အဲဒီစတင်းစာမှာ
ဖော်ပြခြင်းခံရပါတယ် …။ သူတို့နှစ်ယောက်နာမည်တွေက …မောင်သင် နဲ့မယ်ခ လို့ခေါ်တယ်ထင်တာဘဲ …ရှေ့နောက်မှီတဲ့လူကြီးများကိုမေးရင်သိကြအုံးမှာပါ။
ကျနော် ဆရာစိန်ခင်မောင်ရီကို မကွယ်လွန်မီကမေးကြည့်တော့ သူလဲသိပါတယ်။ ….အဲဒီမယ်ခ ဆိုတဲ့အဖွားက ကျနော်နဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်စွာတော်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တင်ပြလိုက်ရတာါ။
သံသရာကြီးမှာ အကြာကြီး ကျင်လည် နေတာ မဖြစ်ဘူးတဲ့ ဘ၀ဆိုတာ မရှိတဲ့အတွက် လူဝင်စားဆိုတာ သတ္တ၀ါတိုင်းပါဘဲ။ လူဝင်စားလို့ ပြောရရင် ဇတ်လမ်းတွေမှ မနည်းဘူး။ ကိုယ်တွေ့တွေကော ကိုယ်မတွေ့ဘဲ ကိုယ်သိတွေကော.. စုံပါ့..
နောက်တီးနောက်တောက် ပြောရရင်.. သူတို့က လူဝင်စားလို့ ပြောတာထက် သရဲဝင်စားတယ် ပြောရင် ပိုမှန်မလားလို့.. ဟီးဟီး..
နောက်ထပ်လည်း ကြုံရင် ထပ်ရေးပေးပါအုန်း.. စိတ်ဝင်စားပါတယ် အားပေးနေပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတယ်ဆိုရင် အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာဆို အခုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလည်းမပါဘူး ။ သေခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာပြောရခက်တာတွေရှိနေတတ်တယ် ။ နာနာဘ၀ ၊ တစ္ဆေ ၊ သရဲ ၊ဗြိတ္တာတွေကလည်း တစ်ကယ်ကိုရှိပါတယ် ။ တစ်ချို့ကြတော့လည်း သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေရှိတတ်တယ် ။ အိပ်ရင်းနဲ့ ၀ိဥာဏ်လွင့်ပြီး ခရီးသွားတာမျိုးပေါ့… ။ etone တောင်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ချင်လို့ လိုက်ကျင့်ကြည့်သေးတယ် (ကျင့်ရင်ရတယ်ပြောလို့ပါ ) ဒါပေမဲ့… ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပါဘဲ ။ အခုတော့အဲ့ဒါတွေမလုပ်တော့ပါဘူး ။နောက်နေ့အချိန်ရပါမှ ကိုယ်တိုင်မှင်စာခြောက်ခံရတဲ့အကြောင်းလေးရေးပြပါဦးမယ် ။ အခုထက်ထိနားထဲစွဲနေခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်လေးပါ ။
etone မှင်စာ ခြောက်မှန်း ဘယ်လို သိလဲ မြင်လား..
အိပ်နေရင်းနဲ့ ၀ိညင်လေး လွင့်ပြီး ရောက်ချင်ရာသွားချင်လို့လား.. တရား များများ ထိုင်လိုက်.. လမ်းမှန်ရင် နိဗ္ဗာန်တောင် ရောက်နိုင်သေးတယ်။ ဘယ်ဟာ မဆို စိတ်ရှည်ရတယ်.. တရုတ်ပြည်မှာ လက်တွေ့ ကြိုးတမ်းပေါ်မှာ အိပ်တဲ့ လူက ၁၅နှစ်ကျင့်ရတယ်.. လုပ်ချင်တဲ့ ကိစ္စ တခုရှိရင် မနားမနေ နှစ်ရှည်လများ လုပ်မှ အကျိုးကို ခံစားရမှာ.. ဆရာလုပ်တာ ဟုတ်ဘူးနော်.. သရဲ ခြောက်ခံရတဲ့ အကြောင်း ရေးမယ်ဆိုလည်း စောင့် ဖတ်နေမယ်နော်..
etone ရေ ကိုယ်တိုင်စာမူ တခုကို ဖန်တီးရေးမယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။
အီးမေးလ်ထဲက ရတဲ့ စာမူတွေက သူများ ရေးထားပြီးသား ကို မြန်မာနိုင်ငံထဲက စာဖတ်သူတွေ မဖတ်နိုင်လို့သူငယ်ချင်းတွေက စေတနာနဲ့ ကူးပြီး ပို့ ပေးကြတာ ဆိုတော့ ပိုင်ရှင် ရှိပြီးသား စာမူတွေ မဟုတ်လား။ ဒါကို သူများစာမူကို ကူးပြီး ဒီဆိုဒ်မှာ ပြန်တင်ရင် စာဖတ်သူတွေတချို့ လည်း ဖတ်ပြီးသား ဖြစ်သလို မူရင်းစာရေးသူကို သိနေတဲ့သူတွေက ဒီစာကို တင်တဲ့သူကိုလည်း ဘယ်လိုထင်ကြမလဲ။
ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ရေးတဲ့ စာမူဆိုရင် လူတိုင်းက ၀မ်းသာအားရ အားပေးကြမှာပါ။ ကိုယ်တွေ မှင်စာအကြောင်းကို စောင့်ဖတ်နေပါမယ်။
မှင်စာဆိုတာသေးသေးလေးလား … မှင်စာလေးနဲ့တူတယ် လို့ပြောသံကြားဖူးတယ် …